Toerana: Town of Plymouth, Etazonia
TFahafahana mamerina: 19m3/ d
WKarazana WTP: Fampitaovana FMBR mifangaro WWTP
Process: Rano maloto → Pretreatment → FMBR → Mahomby
Famintinana ny tetikasa:
Tamin'ny volana martsa 2018, mba hahitana ny teknolojia mitarika eo amin'ny sehatry ny fitsaboana rano maloto sy hanatratrarana ny tanjona hampihenana ny angovo amin'ny fampiasana rano maloto, Massachusetts, ho ivon-angovo madio manerantany, nangatahan'ny besinimaro ny haitao farany ho an'ny fitsaboana rano maloto manerantany. , izay nampiantranoin'i Massachusetts ivon-toerana angovo madio (MASSCEC), ary nanatontosa pilotam-pahefana teknolojia vaovao tany amin'ny faritra fitsaboana na rano maloto nahazo alalana tany Massachusetts.
Ny masoivohon'ny fiarovana ny tontolo iainana MA State dia nanangana manam-pahaizana manam-pahefana hanao fanombanana maharitra iray taona ny mari-pahaizana momba ny fanjifana angovo, lasibatra amin'ny fampihenana ny fanjifana, drafitra injeniera ary ny fenitra takian'ny vahaolana teknika nangonina. Tamin'ny volana martsa 2019, nanambara ny governemanta Massachusetts fa voafidy ny Jiangxi JDL Environmental Protection Co., Ltd. "FMBR Technology" ary nahazo famatsiam-bola avo indrindra ($ 150,000), ary ny mpanamory fiaramanidina iray dia hatao ao amin'ny Plymouth Airport Wastewater Treatment Plant ao Massachusetts.
Ny effluent voatsabo amin'ny alàlan'ny fitaovana FMBR dia miorina amin'ny ankapobeny hatramin'ny niasan'ny tetikasa, ary ny salan'isa antonony isaky ny index dia tsara kokoa noho ny fenitra famoahana eo an-toerana (BOD≤30mg / L, TN≤10mg / L).
Ny tahan'ny fanesorana antonony isaky ny index dia toy izao manaraka izao:
Azota amoniaka: 98,7%
Nitrogène total: 93%
Location: Lianyungang City, Sina
Treatment Capacity: 130.000 m3/ d
WKarazana WTP: Facility Type FMBR WWTP
Mba hiarovana ny tontolo iainana ekolojika eo an-toerana sy hanasongadinana ny fisehoan'ny tanàna amoron-tsiraka azo iainana sy indostrialy, ny governemanta eo an-toerana dia nifidy ny teknolojia FMBR hananganana toeram-pitsaboana fanadiovana fako ekolojika toy ny valan-javaboary.
Tsy mitovy amin'ny teknolojia fanodinana fako nentim-paharazana izay misy dian-tongotra lehibe, maimbo mavesatra ary fomba fanamboarana ambonimbony kokoa, ny zavamaniry FMBR dia mandray ny foto-kevitry ny fananganana maloto ekolojika an'ny "valan-tany ambanin'ny tany sy ny toeram-pitsaboana maloto ambanin'ny tany". Ny fizotran'ny FMBR noraisina dia nanala ny tanky sedimentation voalohany, tank anaerobic, tanke anoxic, tanke aerobic, ary tanky sedimentation faharoa an'ny fizotran'ny nentim-paharazana, ary nanatsotra ny fizotran'ny fizotrany ary mampihena be ny dian-tongotra. Nafenina tany ambanin'ny tany ilay toerana fanadiovana tatatra iray manontolo. Rehefa avy mamakivaky ny faritra fikojakojana, ny faritra FMBR, ary ny famonoana otrikaretina ny tatatra dia azo esorina sy ampiasaina ho rano ho an'ny greening zavamaniry sy ny tontolo eny an-toerana raha mahafeno ny fenitra. Rehefa mihena be ny fako biolojika voajanahary amin'ny alàlan'ny teknolojia FMBR, amin'ny ankapobeny tsy misy fofona, ary sariaka tontolo iainana ilay zavamaniry. Ny faritry ny zavamaniry iray manontolo dia natsangana tao amin'ny plaza fialan-tsasatra amoron-dranomasina, mamorona maodely vaovao amin'ny toeram-pitsaboana maloto miaraka amin'ny firindrana ara-tontolo iainana sy ny fampiasana rano indray.
Location: Tanànan'i Nanchang, Sina
Treatment Capacity: 20 000 m3/ d
Mba hamahana ny olana ara-tontolo iainana ateraky ny loto maloto ao an-trano, ary hanatsarana tsara ny kalitaon'ny rano an-tanàn-dehibe, ary miaraka amin'izay, mieritreritra ny fatiantoka ny fambolena fitsaboana maloto nentim-paharazana, toy ny fibodoana tany midadasika, fofona mavesatra, mila mijanona lavitra ny faritra onenana sy ny fampiasam-bola goavana amin'ny tamba-jotra amin'ny fantsona, ny governemanta eo an-toerana dia nisafidy ny teknolojia JDL FMBR ho an'ilay tetikasa, ary nandray ny foto-kevitry ny "Park any ambony, toeram-pitsaboana any ambanin'ny tany" hananganana foibem-pitsaboana ara-tontolo iainana vaovao miaraka amin'ny fahaizan'ny fitsaboana isan'andro 20 000 m3/ d. Ny toeram-pitsaboana ny maloto dia namboarina teo akaikin'ny faritra onenana ary 6667m monja ny velarany2. Mandritra ny fandidiana, tsy misy fofona mazàna ary mihena be ny fotaka residual organika. Ny firafitry ny zavamaniry dia miafina any ambanin'ny tany. Eo an-kianja dia naorina ho zaridaina sinoa maoderina izy io, izay manome toerana fialamboly ekolojika mirindra ho an'ny olom-pirenena manodidina ihany koa.
Toerana: Tanànan'i Huizhou, Sina
Fahaizana fitsaboana: 20 000 m3/ d
WWTP Karazana: WWTP an'ny fitaovana FMBR mifangaro
Dingana: Rano mandoaka rano → Fanafody fitsaboana → FMBR → Mahomby
Ny Coastal Park FMBR STP dia miorina ao amin'ny Tanànan'ny Huizhou. Ny refy fitsaboana ny rano maloto eto an-toerana dia 20.000m3/ andro. Ny firafitry ny WWTP lehibe dia ny tanky fandraisana, tanky écran, tanky fampitoviana, fitaovana FMBR, tanky effluent ary tanky fandrefesana. Ny rano maloto dia voaangona amin'ny valan-javaboary amoron-tsiraka, seranan-tsambo vokatra anaty rano, wharf mpanjono, helodrano, seranana Qianjin ary faritra onenana manamorona ny morontsiraka. Ny WWTP dia miorina amoron-dranomasina, akaikyd mankamin'ny faritra onenana, misy dian-tongotra kely, vitsivitsy sisa tavela amin'ny fako organika ary tsy misy fofona amin'ny asa isan'andro, izay tsy misy fiatraikany amin'ny tontolo manodidina.